Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Ehlathini - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Ehlathini
Rossville, Georgia, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Faye
U-Faye Ungumbungazi ovelele
Buyela emuva ngesikhathi lapho uhlala endlini yethu yezingodo esezingeni lika-1890 etholakala ngaphansi komlando weMissionary Ridge emahekthareni ayishumi nesithupha. Sitholakala kumamayela angu-3 ukusuka e-Chickamauga Battlefield, ipaki yezempi endala nenkulu kunazo zonke ezweni, kanye namamayela angu-5 ukusuka e-Chattanooga, TN.
Faka indawo usebenzisa isango lokungena eliyimfihlo elinekhiphedi.
Kukhona izitezi zikaphayini wenhliziyo kulo lonke ikhabethe. Umbhede ongusayizi wendlovukazi unomatilasi wekhwalithi yehhotela onombhede kakotini ongu-100%. Nethezeka kubhavu we-6' cast iron claw foot ngensipho yethu yasekhaya yerosemary/mint. Ikhishi lethu linezihlalo ezithokomele zabantu ababili nesiqandisi esihlangene, i-microwave, ipuleti elishisayo, i-coffee maker kanye nohhavini we-toaster omkhulu ngokwanele ukubamba i-pizza engu-12". Kukhona ukugoqa kancane kuvulandi lapho ungajabulela khona ikhofi lakho lasekuseni, noma uhlale buthule kuvulandi jika futhi ujabulele imvelo.
Zisize ngamakhambi amasha (iyini indlu yezingodo engenangadi yemifino) namajikijolo aluhlaza ngesikhathi sonyaka. Njengoba kusalindwe umoya wezinkukhu zethu ezihlala khona, qoqa amaqanda amasha ukuze uthole isidlo sasekuseni.
Impilo imnandi endlini encane.
Kufanele okungenani abe neminyaka engama-21 ubudala.
4.98 · 226 okushiwo abanye
UFaye Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Rossville namaphethelo